HomeSuuqaRio Ferdinand Oo Cadhadii Ka Dagey Singapore
Rio Ferdinand ayay soo gabo gabowday mustaqbalkiisii ciyaareed ee kooxda Manchester United, cadhadiina Vise- u goostay oo ka degay wadanka Singapore kadib markii maamulka naadigu ku wargalliyey inaan rajo ugu hadhin Old trafford ee uu maryihiisa ka urursado maalintii Axadii.
Waxa la soo wariyey in gudoomiyaha naadiga United ee Ed Woodward uu hadal niyada ka dilay ku yidhi Ferdinand, mar uu ugu soo gallay qolka lebiska ciyaartii gunaanadka Horyaalka ee ay la ciyaarayeen Southampton.
Ferdinand Oo macasalaamayna Manchester United
Dad dhawr ah oo kula sugnaa meesha wakhtigaasi ayaa ku tilmaamay hadalkaasi gudoomiye Woodward mid aan ka qabanin, si weyna uga nixiyey ciyaaryahanka 12 ka sanno Man United u soo halgamayay ee Rio.
Intaas kadibna Manchester United ayaa si rasmi ah u baahisay in ciyaaryahankii difaaca kooxdu sidaas kaga ambabaxay naadiga, waxaanay ku yidhaahdeen war murtiyeed ay soo saareen sidan :- ‘’Manchester United waxay uga mahad celinaysaa Rio Ferdinand wakhtigii dheeraa, dedaalkii iyo adkaysigii shaqada kooxda uu u soo qabtay, waxaanay u rajaynaysaa mustaqbal wanaagsan.’’
Habeenkii Isniintii , ayuu Ferdinand website kiisa khaaska ah ku baahiyey hadaladan ‘‘Xaalada ayaa ii saamixi weyday inaan idiin macasalaameeyo habkan aanan jeclaysanin’.
Waraysi kale oo uu bixiyeyna wuxuu kaga faa’iidaystay inuu taageerayaashiisii ku yidhaahdo “ Macasalaama”.
“Duruufaha ayaan ii ogolaanin inaan idhaahdo nabadgelyo oo ahayd sida aan anigu jeclaa laakiin fursaddan ayaan uga faa’iidaysanayaa oo waxaan leeyahay Maca-salaama Ciyaartooyada, shaqaalaha iyo taageereyaasha sida aan la malayn Karin ii garab taagnaa 12 sannadood, waligayna aanan illoobi doonin. Ku guulaysiga koobabka waxa aan ku riyooyin jiray markii aan carruurta ahaa waxaanay iigu rumowday kooxdan weyn.”
In ka yar 24 saacadood kadib ka tagistiisiina wuxuu u duulay wadanka Singapore si uu uga qayb gallo casuumad ay u fidisay Shirkad isgaadhsiineed oo wadankaasi ka dhisan, xaflad ay qabanayso ka hor koobka aduunka.
Rio ayaa ka degay Singapore
Iyadoo uu ciyaaryahanku carabaabay inuu gallayo loolan cusub oo xaga mustaqbalka ciyaaraha ah , waxaa daboolka ka qaaday inuu ciyaaraha sii wadanayo , af-hayeenka Ciyaaryahan Ferdinand oo saxaafada la hadlay.
“Rio wuxuu go’aan ku gaadhay inuu ciyaarista kubada cagta sii wadayo.” Ayuu yidhi Af hayeenka ciyaaryahanku.
Ferdinand ayaa 12 sanno kadib si niyad jab ah uga tagay United
Waxaa Hore u jiray kooxo badan oo danaynaya heshiis ay ciyaaryahankan la gallaan , kuwaas oo badankoodu ka dhisan horyaalada Qaaradaha Aasiya iyo Ameerika.
Somaliland vs Sweden iyo Ciyaarta Maanta – Daawo Sawiradii Soo Dhaweynta Xulka
Scolari Oo Iska Casilay Shaqada Tababaranimo Ee Xulka Brasil
VIDEO Arsenal 3 – 0 Stoke City [Premier League] Highlights